TCS Ọrụ - Tata ndụmọdụ ụlọ ọrụ Ọrụ na nnyema Aka
TCS Ọrụ bụ akụkụ nke ọrụ enyere. Site na ụlọ ọrụ ọkọlọtọ a na India. Na nke a n'uche, ma ọ bụrụ na ị na-achọ mba niile si India na Dubai mba kasị mma ụlọ ọrụ. Kpamkpam, a Ọrụ Tata na-ahụ maka ọrụ ọ bụ otu kachasị mma na otu kacha mma. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ a maara nke ọma International. N’aka nke ozo, enwere otutu ndi mmadu guru akwukwo dika onye isi ndi isi. N'ezie, ụlọ ọrụ ahụ na-akụkarị ndị ahịa ahịa ihe.
Ebe obu na oru ohuru a bu na-aga Dubai. na ndị mmadụ na-enwe ike ịkwagharị ngwa ngwa karịa mgbe ọ bụla ọzọ. Ọrụ TCS na-aga n'ihu. Na ohere kachasị mma. Ejila ọrụ azụmahịa na-arụ ọrụ. Ọzọkwa, nke ndị na-achọ ọrụ na-achọgharị ohere zuru ụwa ọnụ na Ọrụ Tata.
N’iburu nke a n’uche, ndị otu anyị na-elepụ anya. Na nyochaa ụlọ ọrụ a. N'ihi na obere ozi nwere ike iwere ọnọdụ ya na ọkwa ụwa. Na onye nwere ezigbo ahụmihe. Isi ike ịmalite ọrụ na Emirates. Dị ka onye na-achọ ọrụ, ị kwesịrị ị na-ele anya otú TCS dị enyere ndị aka. N'ihi na ha na-akwụ ụgwọ n'ụwa niile. Na-eme ihe Idia na-ere ahịa n'ụwa nile. Ma dịka eziokwu, akụkọ ọhụrụ banyere ọrụ dị ịtụnanya na-asọ n’uwa nile.
Ọrụ TCS na Ụlọ Ahịa
Ọ dị mma, ugbu a, ka anyị jiri obere nkọwa malite. Onye nwere ikike, n'ozuzu ya, nwere ike ịrụ ọrụ n'ụwa niile. N'akụkụ na-adịghị mma, nnukwu òtù mba ụwa. Inwe ezigbo nnukwu ngalaba na ulo oru aka. N'akụkụ dị mma, n'okpuru anyị ọkachamara maka ọrụ mba. Kpochapuru ọrụ kachasị mma ịrụ ọrụ maka ụlọ ọrụ TCS.
Ngwaahịa na Nkesa
Life Sciences & Ahụike
Njem, Transportgbọ njem na elele
Ọrụ ndị ọkachamara gbasara ịgba akwụkwọ
ugbu a Anyị kwesịrị itinye ụfọdụ ozi. Ogo ụlọ ọrụ ahụ bụ ndị ọrụ 10000 +. N'ikwu okwu n'ozuzu, e guzobere ụlọ ọrụ ahụ ogologo oge gara aga na 1968. Ofdị ụlọ ọrụ ahụ bụ Ọha (TCSN). Dika odi, karia India n’etolite. Na-ekwukarị n'ime Kọmputa Mmepụta. Firmlọ ọrụ a bụ naanị n'elu 10 ụlọ ọrụ n'ụwa nile. Dịka ọmụmaatụ, azụmaahịa & ngwanrọ. Na-eme Ego Nweta nke $ 10 + ijeri (USD). Wich na-enye ego kachasị elu kwa afọ n'etiti ndị asọmpi mba ụwa. Dịka ọmụmaatụ, Accenture, IBM, Infosys na ọbụna Apple. Tohapụ ịkọ maka ọrụ ndị ahịa na nnukwu ígwè nke hotels. Isi azụmahịa nke Ụlọ Ọrụ Mgbasa Ozi.
Na-ekwukarị, ọ na-enyere ndị ahịa ya aka ito eto. Yana jikwaa nke oh ọrụ ndị dị ụtọ n'ụzọ. Ijikwa inyere obere ụlọ ọrụ aka iru azụmahịa enweghị isi. N’aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ ahụ na-eduga onye na - eweta IT zuru ụwa ọnụ. Yabụ, buru nke a n'uche, ndị nwere ezi ahụmahụ. Inwe ohere maka ọrụ na ụlọ ọrụ mba. Otu n'ime ọrụ kachasị mma na nyocha, na n'èzí ọrụ ohere. Maa, ndị isi ụlọ ọrụ na-enye. Ọrụ nlekọta Mgbakọ inye ọrụ zuru ụwa ọnụ. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike itinye gị maka ọrụ enweghị ọrụ. Na-ekwukarị, A na-eziga ọrụ ọhụrụ n'ihe karịrị mba 40. Na ebe kariri 5 kọntinenti. Yabụ, n'eziokwu enwere ike ịnwe ọrụ na TCS ụlọ ọrụ karịrị akarị !.
Ụlọ ọrụ TCS
Lọ ọrụ TCS, na-ekwukarị, awade ọrụ usoro azụmaahịa. Nke ahụ dịkwa mma gụnyere ịpụ apụ yana ọrụ njikwa data. Ọzọkwa, ndị isi ụlọ ọrụ ndị isi na ndị isi oche. Na anyị na-enye ezi nhazi usoro. Ụlọ ọrụ ahụ nwere nyocha nke aka ya na nyocha ya. Nke na-enye nnukwu nzọụkwụ n'ihu ndị asọmpi. Yana usoro nhazi ego. Yabụ, ọ bụrụhaala na otu mmepe mmepe ọhụụ ga-aga n'ihu mba ụwa. Ndi otu injinia na ahia ha na ijikọ usoro. Amalite na-arụ ọrụ n'otu oge maka ụlọ ọrụ ọ bụla. Ihe owuwu ahu gabigoro na ulo oru ohuru na ebili na TCS.
N'ihi na ụlọ ọrụ a ọpụrụiche na-emepe emepe ọhụụ. Inyere ọhụụ amalite ịmalite ọrụ ahụ. Yana sọftụwia ahaziri maka mkpa azụmaahịa ha. Mgbe ah ọtụtụ n'ime ndị ahịa ya na India na US tụkwasịrị ntụkwasị obi nnukwu ụdị a. Industlọ ọrụ ọhụrụ na-arị elu. Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ahụ bụ ụzọ iji buru ibu ịga na-atụ anya iche nke itinye ego. Ma dika anyi mara na enwere ike itinye ndi na acho oru. Dịka ọmụmaatụ ọtụtụ ụlọ ọrụ, site na mmepe ike na injinịa. Ruo ego ọrụ na India na Dubai. Ọzọkwa ka ị na-ere ahịa na telecom n'ọfịs ụwa dum. Nhazi ụlọ ọrụ dị na North America, Latin America, na Europe.
Ọzọkwa, na ụlọ ọrụ TCS Weebụsaịtị na-elekọta. O doro anya na ọtụtụ ndị njikwa. Akpọwo ọrụ ha na TCS. Na osisi nke CEO na A na-achịkwa ndị isi nachị. Zaa obere ọgbakọ dịka ụlọ ọrụ textiles. Ka na-eto na ụlọ ọrụ TSC. N’aka nke ozo, imeputa otutu ihe banyere Tata Group. Na-etolite abawanye na nke a na-enye nnukwu ohere nke ọ bụla mba ọ bụla.
Kedu otu esi enweta ọrụ na TCS?
N'ezie, ihe kacha mma bụ TCS Careers website. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ eziokwu, Tata Consultancy Services (TCS). Ịkpọ ndị mmadụ gburugburu ụwa. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba ọ bụla n'ụwa nile. Nanị n'ihi na ha fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ọ bụla. N'ụzọ dị iche, a na-ewere ya dị ka otu n'ime ndị isi ụlọọrụ IT na India. Ya mere, Ndị India na-achọta enyemaka nyocha ọrụ. N'akụkụ na-adịghị mma, enwere ọtụtụ ikike ịchọrọ ịgbaso. Dịka ọmụmaatụ na India, nke mbu, mmadụ kwesiri idebanye aha ya na TCS Careers. Thenlọ ọrụ ahụ na-eduzi nyocha azụ. Ma n'otu oge ahụ, na kampos ma ọ bụ wepu kampos. Ndị TCS na-adọta ndị na-achọ ọrụ ọhụrụ ịgha ndị chọrọ.
N'ikwu okwu n'ozuzu, ndị isi ọrụ nwere ike ịtụ anya ọrụ dị iche iche na-enye. N'ezie, ọtụtụ ọrụ na-enye site n'aka ụlọ ọrụ B.Tech. Yana ndi choro MCA bu ezigbo uzo nye ndi oru ohuru. Yabụ, ka anyị chee ihu na mmadụ ọhụrụ nwere ike, n'ikpeazụ, nwere ọrụ n'ọdịnihu. O doro anya na ị ghaghị inwe ezigbo ọmụmụ ihe na nkuzi. Ya mere, nyere isi ihe ndị a, chọọ ọrụ na weebụsaịtị TCS Careers section.
Ọ bụrụ n’ịchụso ohere ọ bụla ma ọ bụ na-achọ ngalaba ọrụ TCS. Mgbe ahụ ị ga - elelee kọleji gị. N'ihi na ọtụtụ n'ime ha na-arụ ọrụ na ndị ọrụ TCS. Na nke a n'uche, nke ụlọ ọrụ na India ma ọ bụ ná mba ọzọ. Ikekwe na-eduzi ụlọ akwụkwọ na-ụlọ akwụkwọ na kọleji gị. Ọ bụrụ na ọgaghị eji ebe nrụọrụ weebụ TCS. Ma gbalịa ịmepụta ụlọ akwụkwọ mpempe akwụkwọ na mba ma ọ bụ Mba. Maka nke nwere ike ime ka ị nweta ọrụ. Nke ahụ ga - abụ ụzọ kachasị mma maka gị dịka onye na-achọ ọrụ.
Kedu ihe ị ga - achọ ịmalite ọrụ na ụlọ ọrụ TCS?
Ihe ka mkpa bụ inwe A B. ma ọ bụ MCA akara site na mahadum a ma ama.
N'oge ugbu a, TCS na-atụ anya ka kachasị 60% akara niile na-arụ ọrụ ule.
N'ikwu okwu n'ozuzu, akara ngosi 60% ga-adị na 10th, 12th, diploma / ngụsị akwụkwọ, ule mmụta nke post-graduation.
Enwere ule dị iche iche tupu enyocha ndị nyocha. Ya mere, nkwadebe bụ isi ihe ịga nke ọma.
Ebe ọ bụ na mmadụ ọhụrụ ga malite itinye aka na mahadum. Minimum kwesịrị akara ma ọ dịkarịa ala nke 60% akara na mbido mbụ.
N'ikwu okwu n'ozuzu, otu ụzọ ị ga - esi ruo ndị ọrụ Tata. Ikekwe ihe karịrị afọ 2 ma ọ bụ 3 afọ na agụmakwụkwọ ma ọ bụ ahụmịhe ọrụ.
Naanị ndị aga-aga akwụkwọ nwere ike itinye akwụkwọ maka ọrụ. Ọ ga-abụrịrị na ị gụchara akwụkwọ oge niile. Na ọ bụ naanị ndị ahụ ka a ga-ele anya dị ka ndị bịara ọhụrụ.
Usoro Nhọrọ TCS
1. Na-ebugote Mbido
2. Nnwale Uche
3. Nnyocha na-enyocha
4. Ajụjụ Nyocha
5. Ajụjụ nyocha
7. Ọrụ na Nkwekọrịta
8. Ịmalite ọrụ
Mmechi maka ọrụ TCS
Yabụ, ugbu a bụ oge maka nkwubi okwu. Chọta ezigbo ọrụ adịghị mfe ọ bụla ọbụlagodi na ọrụ nyocha Tata. Enwere ọtụtụ ule dị mkpa iji gafere. Na-ekwukarị onye njikwa HR. Ọ dịrịghị gị mfe ịgafe. Karịsịa maka ụmụ akwụkwọ ọhụrụ. Ọzọkwa, ndị otu kachasị sie ike agụọla akwụkwọ, ụmụ akwụkwọ. N'akụkụ dị mma, ndị na-achọ ọrụ na ahụmahụ dị mma. Inwe ụzọ dị mfe maka ịmalite ọrụ.
N'akụkụ nke ọzọ, ụlọ ọrụ Dubai City. Ndị na-eduzi ndị mmadụ maka ohere kachasị mma. Na na ọrụ nlekọta Tata. Oge ọ bụla nke oge gị bara uru. N'ihi ụlọ ọrụ nwere mgbasa ozi zuru ụwa ọnụ. Na-enye ọ bụghị naanị ezigbo ọrụ ọrụ. Ma ọzụzụ kachasị mma. Anyị nwere olileanya na ị ga-abụ otu n'ime ndị ọrụ obi ụtọ.